हस्पिटलले नसकेको बिरामी निको नभएपछि चिहानमै पुगेर आत्मासँग झाँक्रीले भिडन्त गरेर बिरामी निको बनाए। - Like For Nepal
हस्पिटलले नसकेको बिरामी निको नभएपछि चिहानमै पुगेर आत्मासँग झाँक्रीले भिडन्त गरेर बिरामी निको बनाए।
यो पनि पढनुहोस्।
गाउँ घरमा पाइने सिस्नु सवैलाई थाहा भए पनि फाइदाका विषयमा सवैलाई थाहा नहुन सक्छ। सिन्नुमा पाइने विभिन्न भिटामिनले मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा र्पुयाउने गर्छ। सिस्नो अहिले शहरका ठूला–ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोर, तारे होटल, रेष्टुँराहरूमा महँङ्गो खानाको रुपमा रहेको छ।
सिस्नो खानुकाका फाईदा: पाचनमा सिस्नो लाभदायक हुन्छ। रुघाका कारण घाँटी बसेको अवस्थामा, गुद्धद्वार सुन्निँदा, नाथ्री फुट्दा र मुख दुख्ने रोगमा पनि सिस्नुको सेवन लाभदायक हुन्छ। अपचमा पनि सिस्नो सेवन लाभकारी छ। यसमा रहेको रेसाले आन्द्रामा अड्केका बिकारलाई सहजै तानेर मलद्वारतर्फ खिच्छ, सिस्नोमा पोषणको भीषण योग हुन्छ।
भिटामिन, मिनरल, बेटा कारोटेन, पोटासियम, आइरन, क्लोरोफिल र जिङ्क यसमा भएका हुनाले शरीरमा लाग्ने धेरै प्रकारका रोगहरुसँग सिस्नो सधैँ नै सो भिडिरहेको हुन्छ। महिलाहरुका लागि सिस्नो एकदमै उपायोगी हुन्छ किनभने यसमा पर्याप्त फलाम तत्त्व हुन्छ जसले रक्तअल्पता र कमजोरी हटाउन सहयोग गर्छ।
यसले कलेजो र महिलाको हर्मोनको संरक्षण गर्न सहयोग पुप्याउछ, यतिमात्र होइन यसले गर्भिणी महिलाको पेटको बच्चालाई मजबुत पार्न र रक्तश्राव रोक्नस हयोग गर्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र ? यसले त महिलाको दूध उत्पादन र छिटै रजनोवृत्ति हुनबाट समेत रोक्छ।
सिस्नोलाई ‘हर्बल टनिक्स’हरुमा महिलाहरूको योनीमा आउने बिबिरा हटाउन र मासिक धर्म नियमत होस् भन्ने प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कपाल झर्ने समस्याहरुमा र छालाको रोगमा समेत यो उत्तिकै उपयोगी हुन्छ। डन्डीफोरको समस्या हटाउन र टाउकोको छालामा हुने अन्य समस्या हटाउन यो वनष्पति उपयोगी छ, शरीरका अंगहरूमा अनेक कारणले भएको दुखाईमा सिस्नोको सेवनले आराम दिन्छ।
Prev९ जना श्रीमती ल्याएपछि पर्यो हानाहान, २६ बर्षमा ल्याए ९ जना श्रीमती, ८ औ श्रीमती आक्रोशित हुँदै आइन।
Nextटीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा खसेपछि हेर्दा हेर्दै ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लग्यो ज्यान #Exclusive.
भर्खरै कोठाबाट आमाजू समातिन् ,आफ्नै बुहारी अर्कै केटासंग भगाएपछी पर्यो लफडा हेर्नुस् (भाग-१) Buddha
१०र१२ बर्षे ब*हिनिहरुलाइ Lockdown भरि निरन्तर ब*लात्कार गरे पछि रु’दै बा*लिका सक्दो सेयर गरौँ।।
आज घेरियो लोक सेवा आयोग,मर्नु कि बाच्नु भयौ जाने ठाउँ छैन,रिजल्ट कहिले आउँछ ?
घट#नास्थल पुग्दा बाहिरियो यस्तो बास्ताबिकता, घर नै छाडर परिवार फ-रार ।
संखुवासभा घ’टनामा ड’रलाग्दो क’ल रे’कर्ड, काकाले लोकबहादुर लाई फोनमा यस्तो भने, Sankhuwasabha news
Breaking news morang | रोजिना घ,टनाको नालिबेली सुनाउदै माइती पक्ष || rojina puri
महीला र कुकुर एउटै डोरीमा ! घ-टनास्थलमा देखीयो अनौठो दृश्य,पोखरामा के भयो यस्तो #exclusive